Ahoana no hahitana ny IMEI an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Paul Aparicio | | iPhone, iTunes, Fampianarana sy torolàlana
Misy ny mety mety ilaintsika mamantatra ny fitaovantsika finday (na olon-kafa). Ahoana no ahafahantsika manao izany? Fa noho izany, ary amin'ny fiheverana fa antsoina hoe Actualidad iPhone ilay bilaogy, mila fantarintsika izany inona ny IMEI amin'ity iPhone ity. Ankoatry ny fomba misy amin'ny fitaovana rehetra, Apple dia mamela antsika hahalala ity kaody ity amin'ny fomba dimy samihafa.
Ny kaody IMEI dia misy a totalin'ny 15 isa, tarehimarika sasantsasany izay misaraka indraindray, izay afaka manampy antsika handika azy io tsara kokoa. Ny isa izay mahaforona isa IMEI dia azo avy amin'ny Algorithme Luhn, noforonin'ny mpahay siansa Hans Peter Luhn ary ny asany dia ny fisorohana ny hadisoan'ny olombelona rehefa ampidirina amina antonony sasany, toy ny amin'ny finday. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hamafa ny fisalasalana rehetra mety anananao momba ity kaody lehibe ity.
1 Inona ny IMEI?
2 Ahoana no hahitana ny IMEI an'ny iPhone
2.1 Avy amin'ny toe-javatra
2.2 Avy amin'ny keypad isa
2.3 Mijery ao ambadiky ny iPhone
2.4 Mijery azy ao anaty boaty
2.5 Avy amin'ny iTunes
3 Ahoana ny fanidiana iPhone amin'ny IMEI
4 Ahoana ny fomba hamohana ny iPhone amin'ny IMEI
5 Azo ovaina ve ny IMEI an'ny iPhone?
Inona ny IMEI?
Raha manana takelaka finday ny takelaka finday dia ho IMEI anao izany takelaka izany. Ny kaody IMEI an'ny telefaona (amin'ny anglisy Identity momba ny rafitra finday iraisam-pirenena) no kaody izay mamantatra ilay fitaovana tsy am-pihambahambana manerantany, ary ampitain'ny fitaovana amin'ny tamba-jotra rehefa mampifandray azy. Ity kaody ity dia ampiasaina raha sendra misy fangalarana na fatiantoka hanidiana hidin-trano lavitra ilay fitaovana, amin'izay dia hanana fitaovana tsy azon'izy ireo ampiasaina ilay mpangalatra.
Avy amin'ny toe-javatra
Ny fomba tsotra indrindra hahitana ny IMEI-tsika dia avy amin'ny toe-javatra iPhone. Ho an'ity dia handeha isika Fikirana / ankapobeny / fampahalalana ary midina isika. Afaka mahita ny IMEI-tsika eo ambanin'ny adiresy Bluetooth isika (ao amin'ny iOS 8.4.1).
Fantaro ny IMEI Amin'izany fomba izany dia manana tombony hafa izy ary izany, raha milalao segondra vitsy eo isika dia afaka maka tahaka sy mametaka azy amin'izay tiantsika.
Avy amin'ny keypad isa
Io fomba io dia mitovy amin'ny azo ampiasaina amin'ny telefaona finday hafa. Raha efa nanao an'io isika ary mahatadidy dia afaka mampiasa azy io amin'ny iPhone ihany koa isika. Raha te hahalala ny IMEI avy aminay amin'ny fitendry nomerika dia izao no hataonay:
Manokatra ny application izahay telefaonina.
Nilalao izahay Ohatra.
Manoratra izahay 06 #. Hiseho eo amin'ny efijery ny isa.
Mba hivoahana, dia nipaipaika izahay OK.
Mijery ao ambadiky ny iPhone
Tsotra, nefa mandaitra. Raha te hahafantatra ny IMEI an'ny iPhone isika, mila mihodina fotsiny isika dia mijery ny pirinty kelyamin'izay ambanin'ny lahatsoratra milaza iPhone. Raha mieritreritra isika fa diso dia afaka mieritreritra ihany koa isika fa novaina ny tranga, ka io fomba io dia mety tsy ho azo itokisana araka izay tadiavintsika raha tsy azontsika antoka fa efa azontsika foana ny iPhone.
Mijery azy ao anaty boaty
Mazava ho azy fa tsy ho eo amintsika foana ilay boaty, saingy fomba iray hafa hahafantarana ny IMEI an'ny iPhone izay mety ho mora ampiasaina, indrindra raha tsy eo imasontsika izany. Jereo fotsiny ireo sticker eo amin'ny sisin'ny ambanin'ilay boaty hahitanao ny kaody.
Avy amin'ny iTunes
Farany, afaka manao izany koa isika fantaro ny IMEI avy amin'ny iTunes. Ity fomba ity dia tsy hoe sarotra kokoa izany, saingy tsy dia ilaina loatra satria ho hita eo amin'ny fihetsehana izy io ary tsy hanana fotoana hanondroana azy na zavatra hafa isika. Raha hijery ny kaody avy any iTunes dia hataonay izao manaraka izao.
Manokatra iTunes izahay.
Miaraka amin'ny lakile PO potserina, mankany amin'ny menio izahay iTunes / Momba iTunes.
Ho hitantsika fa hiseho ny angon-drakitra iPhone ary, anisan'izany, ny IMEI.
Ho fampitandremana dia ampahatsiahivo anao izany ity kaody ity dia fampahalalana lehibe amin'ny fitaovanao, noho izany Tsy mila manome ny IMEI na amin'iza na amin'iza ianao raha tsy hoe ilaina mafy. Mazava ho azy, aza mamoaka azy amin'ny tambajotra sosialy mihitsy.
Ahoana ny fanidiana iPhone amin'ny IMEI
Tsy afaka ny mpampiasa manidy fitaovana avy amin'ny IMEI. Raha very ny iPhone na mangalatra, tsy maintsy mangataka fanampiana amin'ny mpandraharaha antsika isika. Ho an'ity, tsara kokoa ny manao antso, saingy tsy maintsy jerentsika aloha ny IMEI an'ny fitaovana tiantsika sakanana. Ary ahoana no ahafantarantsika ny atao hoe IMEI raha tsy manana fidirana an-telefaona isika? Soa ihany, ny iray amin'ireo fomba hahafantarana ny IMEI an'ny iPhone izay nohazavaina tamin'ity lahatsoratra ity dia manazava izany. Ity no fomba laharana 4: mila mahita ny boaty fotsiny isika ary mijery ny sticker eo amin'ny farany ambany (rehefa mitoetra eo amin'ny toerany voajanahary).
Amin'ny IMEI hita, isika ihany antsoy ny mpandraharaha anay ary mangataka anao hanidy ny findainay. Azo antoka fa hametraka fanontaniana vitsivitsy izy ireo hanamarinana ny mombamomba anay ary izahay dia tompona iPhone ara-dalàna tianay sakanana, saingy tsy tokony ho olana izany raha tena tompon'ilay fitaovana tianay sakanana izahay.
Na ahoana na ahoana, misy Karohy ny iPhone-koAlohan'ny hanidiana ny findaiko amin'ny IMEI dia nanandrana nitady azy aho ary nifandray tamin'ilay olona nahita azy aza. Ho an'ity, ampy izay ny mankany icloud.com na miditra amin'ny rindrambaiko hafa amin'ny iOS izahay. Rehefa tafiditra ao anatiny isika dia afaka manamboatra azy io ho very, manampy hafatra eo amin'ny efijery hidin-trano, sakano izany na mamafa ny atiny. Ny tsara indrindra, tsy isalasalana, dia ny fanarahana an'ity dingana ity:
Apetraho amin'ny maody very ny iPhone.
Manampia hafatra eo amin'ny efijery hidin-trano. Mitandrema tsara amin'ny hafatra. Tsy tokony hatao mahery setra loatra, satria mety nangalatra tamintsika izy io ary mety hanary azy io, hanorotoro azy na iza no mahalala izay mahasosotra antsika fotsiny hamaly ny hafatray. Hametraka zavatra toy ny hoe “Salama, manana ny findainao ianao. Miantso ahy. Misaotra "ary, angamba, lazao azy hoe aiza izy.
Ataovy maneno. "Amin'izay mba?" Mety manontany tena ianao, ary ny valiny dia angamba izay manana izany tsy mahalala. Mety ho toa hadalana aminao izany, fa nisy lehilahy naka ny iPad an'ny rahalahiko tamina fifaninanana nieritreritra fa azy io, niantso ahy ny rahalahiko, nataoko naneno izy io ary ilay naka azy dia nandiso azy ho iPad. Total, izay niverina naka ny azy ary namela ilay efa nesoriny (heverina) ho diso.
Miaraka amin'ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo, izay manana ny iPhone dia efa mahalala an'izany fantatray fa manana ny nomeraon-telefaoninay sy aiza izy io. Antenaina fa averinao aminay izany ary hitohy hiasa ilay fitaovana. Raha sakanantsika amin'ny alalàn'ny IMEI izy dia ho lasa milanja taratasy mahafinaritra ny iPhone na dia miverina amin'ny tompony aza izy io.
Ahoana ny fomba hamohana ny iPhone amin'ny IMEI
Na dia lasa tsy dia mahazatra loatra aza ny mividy telefaona isaky ny mpandraharaha dia hitohy hisy io fomba fanao io. Betsaka ny mpampiasa no tia mividy finday maimaim-poana noho ny iray mifamatotra amin'ny orinasa iray, satria amin'ny farany dia mandoa vola bebe kokoa izahay. Fa marina ihany koa fa, toy ny rehetra fanohanana ara-bolaNy fianteherana amin'ny mpandraharaha iray hividy fitaovana dia mety raha mbola tsy manam-bola hividianana azy indray mandeha isika na tena ezaka lehibe izany.
Ireo finday ireo matetika mifandray amin'ny orinasa ary miasa amin'ny karatra mpandraharaha izay ampifandraisin'izy ireo fotsiny izy ireo. Raha tsy hoe mamoaka azy isika. Toy ny amin'ny fanidiana ny fitaovana amin'ny IMEI, raha hanokatra iPhone dia mila fanampiana avy amin'ny antoko fahatelo isika. Safidy tsara no iray atolotray anao amin'ny News iPhone izay serivisy LiberaiPhoneIMEI. Tena marina fa hikasa an-trano foana isika, fa eto sy any Patagonia, nefa marina ihany koa fa ny vidiny mahazatra indrindra hamahana iPhone dia € 9.95 ary eto dia manana safidy 3 € mora kokoa isika. Mazava ho azy, raha mbola tsy mampaninona anao ny miandry adiny 3 vao hahazo ilay famotsorana.
Raha hamaha iPhone amin'ny LibreiPhoneIMEI Mila miditra ny IMEI ao anaty boaty mifandraika fotsiny isika ary tsindrio ny bokotra PayPal, izay hitondra antsika any amin'ny kaonty PayPal mba handoavana ny vola. Ny famohana dia hitranga ao anatin'ny fe-potoana nofidinao. Raha misafidy ny laharam-pahamehana farany ambany ianao izay misy ny vidiny 6,95 €, dia tsara kokoa ny manadino izany mandra-pahatapitry ny adiny telo voalaza amin'io taha io. Aorian'ny adiny telo dia ampahafantarinay ny karatry ny mpandraharaha vaovao ary hizaha raha miasa miaraka amin'ny SIM avy amina orinasa hafa, amin'izay dia ho fantatsika fa efa afaka maimaim-poana izy io.
Azo ovaina ve ny IMEI an'ny iPhone?
Eny, fa avy amin'ny a kinova taloha an'ny Windows. Nahoana isika no te hanova ny IMEI an'ny telefaona? Mety te hanova ity kaody ity isika raha nividy iPhone an'ny taloha any ivelany, satria mety nahazo zavatra tsy marim-pototra teto amin'ny firenentsika isika. Mazava ho azy, tsy hanome soso-kevitra hikasika zavatra aho raha tsy manome olana antsika ny iPhone. Izany hoe hataontsika ilay "raha mandeha dia aza kitihina."
Ovao ny IMEI an'ny iPhone dingana tsotra izay tratra noho ny fandaharana ZipPhone. Hataontsika amin'ny fampiharana ireto dingana manaraka ireto:
Misintona ny ZiPhone izahay.
Izahay dia manafoana ny fisintomana ilay rakitra ao amin'ny dingana teo aloha ary mamela azy eo amin'ny birao.
Tsindrio ny bokotra Windows Start, sokafy ny Run ary kitiho ny "cmd" raha tsy misy teny nalaina.
Nanoratra izahay "birao cd / ziphone”, Raha tsy misy ny teny nalaina, eo amin'ny saha fikarohana ary tsindrio Enter.
Mampifandray ny iPhone amin'ny solosaina izahay.
Apetrakay amin'ny maody DFU ny telefaona. Noho izany dia tsindrio ny bokotra herinaratra sy ny bokotra ao an-trano mandra-pahitantsika ny logo Apple, avy eo avoaka ny bokotra herinaratra ary tazomina ny bokotra an-trano mandra-pahitantsika ny logo iTunes miaraka amin'ny tariby.
Manoratra "Ziphone -u -ia 123456789012345" (tsy misy teny nalaina foana) ao amin'ny fangatahana baiko. Tsy maintsy manova ny isa IMEI tadiavintsika amin'ny kaody teo aloha isika.
Miandry ny programa hahita ny fisie zibri.tad izahay ary hamerina. Raha vao manomboka dia efa hampiasa ny IMEI vaovao isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iTunes » Ahoana no hahitana ny IMEI an'ny iPhone
salut dia hoy izy:
hace 14 taona
Raha esorinao ny fitoeram-bokatra izay itehirizana ny SIM dia ho hitanao fa voasokitra anaty volamena ny IMEI sy ny laharana serial an'ny iPhone 😀
Mamaly an'i helloz
NEFA dia hoy izy:
helloz dia manamarina ny valinteninao ho an'ny IPHONE4
Valio amin'i ALE
Salama ahoana ny zavatra? Misy mahay mamoaka iphone amin'ny tarika ratsy ve? sa fantatrao raha any an-tany hafa ianao dia afaka mivoaka amin'ny tarika ratsy?
Dennis dia hoy izy:
Misaotra betsaka fa tsy azoko antoka raha marina ny imei teo amin'ny lovia fa efa hitako kosa ny misaotra anao indray
Mamaly an'i dennis
Manana iphone 5 aho ary nanao antso an-tariby * # 06 # tamin'ny telefaona hizahana raha voajirika izany ary mampiseho 00000000 fa tsy ny nomeraon-telefaona IMEI mahazatra. Azonao lazaina amiko ve ny dikan'izany?
Jose Luis Rozas dia hoy izy:
Raha mijery ny iPhone
Valiny tamin'i José Luis Rozas
Pablo Garcia Lloria dia hoy izy:
Kandidà Chorrapost amin'ny volana
Valiny tamin'i Pablo García Lloria
Edwin Azocar G dia hoy izy:
Fitaovana maro no manana ny imei ao aoriana. Saingy mamporisika ny hampiasa ny # # 06 # aho satria tena mahay mandanjalanja ny Sinoa. Amin'izay dia azo antoka kokoa ny mahafantatra ny tena imei'ny fitaovana.
Valiny tamin'i Edwin Azocar G
Javier Camacho sary placeholder dia hoy izy:
Ao amin'ny fitoeran-tsolika SIM, raha tsy novaina ...
Valiny tamin'i Javier Camacho
Jefferson Dominguez dia hoy izy:
Misy mahay manova azy ve?
Valiny tamin'i Jefferson Dominguez
Ahoana no ahitako ny imei-ko raha very ny findaiko nefa tsy ananako ilay boaty…. Vonjeo
Maria Ariza dia hoy izy:
Raha tsy fantatro ny IMEI-ko ary nangalarina ny sela. Ahoana no ahalalako ny IMEI ary hahafahako manakana ny telefaona na mahita azy?
Mamaly an'i María Ariza
Aria dia hoy izy:
Ahoana no ahafahako mamoha iPad raha tsy misy teny miafina?
na ahoana no ahafantarako ny imei an'ny ipad, rehefa voasakana izy io?
Mamaly an'i aria